Izwi reWWDC 2017 rakakumirira paYouTube | IPhone nhau
Iyo yakakosha iyo yakapa nzira kumusangano wepagore wevagadziri weApple yakagadziridzwa uno Muvhuro wapfuura mu McEnery Musangano Wenzvimbo muSan José, California. Saka Apple yakadzoka, mushure memakore gumi nemashanu, kuzotora guta iri sechiitiko cheWWDC mushure mekushandurwa kwakawanda kwakaitwa muSan Francisco. Akazviita kuburikidza nemusuwo wepamberi, neimwe yehurukuro dzakazara kwazvo dzichangobva kurangarirwa pachiitiko ichi.
MacBook Pro kuvandudzwa, nyowani uye ine simba kwazvo iMac Pro, nhau mune ayo ese mashandiro masisitimu uye, hongu, iyo ichangoburwa HomePod iyo yakazvipira zvakanyanya kumimhanzi uye smart zvishandiso mumba. Zvese izvi mumaawa angangoita maviri nehafu ekuratidzira uko nhau dzakapihwa nekukurumidza, nekukurumidza uye pasina kumbomira.
Kana iwe wakarasikirwa nechimwe chinhu panguva yechiitiko chiripo uye uchida kuchiona zvakare, kana kutadza kuchitevera nemararamiro nekuda kwechero mamiriro ezvinhu, ikozvino unogona. zvakananga kubva kuYouTube. Mushure mekuita kuti vhidhiyo iwanikwe kwemazuva mashoma chete pawebhusaiti yayo, Apple yakaisa kune yayo YouTube chiteshi iyo yakazara WWDC 2017 yakakosha kune chero munhu anoda kurangarira zvakaitika neMuvhuro wadarika muguta reCalifornia reSan José.
WWDC yakatovhara madhoo ayo kusvika gore rinouya, asi bhawa rakagadzwa kumusoro uye zviitiko zvitsva zvichauya zvakamirirwa nemwoyo wese pasirese. Sezvineiwo isu Isu takatokwanisa kuyedza mamwe matsva eIOS 11 uye WatchOS 4 uye tinokukoka iwe kuti uzive zvese nezve aya mavhezheni ekutanga eApple masystem anoshanda zvakare mu yedu YouTube chiteshi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Iwe unogona ikozvino kuona iyo yakazara vhidhiyo yeiyo WWDC kiyi yakakosha paYouTube
Iyo iPhone 8 inogona kunge isina Gigabit yekumhanyisa modem